» महिनावारीका बेला बग्ने रगत किन शरीरमा दल्छन् यी युवती?
महिनावारीका बेला बग्ने रगत किन शरीरमा दल्छन् यी युवती?
११ श्रावण २०७६, शनिबार ०६:३५
२७ वर्षीया लौरा टेक्सिरिया हरेक महिना महिनावारी भएका बेला निस्किने रगत जम्मा गरेर अनुहारमा लगाउँछिन्। त्यसपछि बचेको रगत पानीमा मिसाएर बोटमा हाल्छिन्।
लौरा भन्छिन्, ‘म त्यो दिन यी सब गर्न बन्द गर्नेछु, जुन दिन महिनावारीका बेला निक्लिने रगतलाई प्राकृतिक चिजको रुपमा हेर्न सुरु गरिनेछ।’